The Iwu: kamera mmekọahụ bụ ndụ porn maka ugwo | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Iwu Mmekọahụ kamera
Otu ihe edere na BBC 3 kpọrọ "ụmụ nwoke Webcam" nke na-agbasa na February 2016 kọrọ na multibillion paụnd, ụlọ ọrụ weebụ kamera zuru ụwa ọnụ. Ọ gbasoro ndụ nke 4 nwa okorobịa kamera ụdị dị na UK. Igwe kamera bụ ebe ndị mmadụ na-ebi ndụ, ihe na-akpali agụụ mmekọahụ site na igwefoto kọmputa maka ịkwụ ụgwọ ndị ahịa. Ọ dị ka sexting na ama ama ma n'ogo buru ibu. Nke a bụ obere oge n'akụkụ ụlọ ọrụ porn. A na-eche na ọ ga-abụ na 100,000 na-arụ ọrụ kamera na UK nanị.
Ụdị ndị a na-ese maka ihe nkiri ahụ weere ya dịka ụzọ isi mee ka ego dị mfe, na-eme nanị mmekọahụ ma ọ bụ na ndị enyi ha ga-eme, ma ugbu a, ha ga-akwụ ụgwọ iji mee ka ndị ahịa ha dịgasị iche iche dị iche iche na fantasies.
Niile ụdị na-emeso ya dị ka azụmahịa. Dika otutu ndi choputara, ndi mmadu n'emechaghi ka ndi mmadu megharia onwe ha ma ha choro ihe ohuru na ihe ndi na-akpali akpali. Nke a pụtara na iji mee ka ndị ahịa nwee obi ụtọ na 'ụdị' ndị ahụ na-anwa ịnwa ịbanye ndị ọhụrụ n'ime azụmahịa ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ka njọ ka ndị ahịa na-akwụ ụgwọ.
Dịka otu isiokwu dị na magazin ụmụ nwanyị na 2014, ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-eme 'maka' ụmụ nwoke na kamera kamera na nkwụghachi maka onyinye ha rịọrọ maka site na ndepụta aha Amazon. Ọ bụ ebe na-amị amị. Ọtụtụ ndị na-etinye ego na ego ma na-atụgharị omume ha n'agbanyeghị na ha emebi iwu ha ma ọ bụ nke ndị òtù ezinụlọ ha nwere nchegbu. Ọtụtụ anaghị ele ya anya dị ka ụdị ịgba akwụna.
Otu ihe nlereanya na ihe ndekọ ahụ mesịrị mezuo ókè ya nke na-agbalị ime ka ndị ahịa na-achọsi ike karie ma kpebie irere ya ụlọ ọrụ nche.
Ma onye na-enye ihe onwunwe ma ọ bụ na-achọ ya, ịgba ọtọ na ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ihe dị mkpa na-enye aka na-eme ka ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ.
Ndị ọkachamara na-eme mpụ dị egwu echepụtawo ndị ọrụ na-akwụ ego nye ezinụlọ dara ogbenye na mba ndị dara ogbenye bụ ndị na-amanye ụmụntakịrị ka ha nwee mmekọahụ site na kamera maka agụụ mmekọahụ nke ndị ahịa si mba ọzọ.
N'ihe na-adịbeghị anya, ihe atụ dị oké njọ bụ ịba ụba Trevor Monk bụ onye na-eme onwe ya ihe ọchị na-eji ụmụ agbọghọ na Philippines eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, a tụrụ ya mkpọrọ maka afọ 19 na ọkara. Trevor Monk kwukwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ £ 15,000 iji lelee mmekorita ụmụaka na Manila na kamera ya.
Ndị uweojii hụrụ ihe karịrị 80,000 ihe oyiyi na 1,750 vidiyo na-ezighị ezi nke ụmụaka na-awakpo n'ụlọ ya na March 2015. O kwetara na ọ na-eme ihe oyiyi na-adịghị mma nke ụmụ, ịwakpo nwatakịrị n'okpuru 13 ma mee ka nwatakịrị nwee mmekọahụ.
Otu n'ime ụmụ agbọghọ ahụ ọ metọrọ dị afọ asatọ na onyogho nwatakịrị dị afọ atọ n'etiti foto ndị ahụ. Onye ọka ikpe Anuja Dhir kọwara foto ndị a dịka "onyonyo jọgburu onwe ya nke ụmụaka dị obere na-emegbu ma mekwaa ha omume dị njọ".
<lọ Ọrụ Mmekọahụ